မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ကရင်ကရင် ဘာကိုမြင် ~ ဟိုရှေ့နားက ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးကင်
ကရင်ကရင် ဘာကိုမြင် ~ ဟိုရှေ့နားက ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးကင်
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ကရင်အမျိုးသားရေး ဝါဒီတစ်ယောက်တော့ လုပ်ပြန်ပဟလို့ ရုတ်ချည်း ထင်
ကောင်း ထင်မိနိုင်ကြမယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ၊ ဟုတ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ နှစ်ခုလုံးလည်း မှန်ပါတယ် ။
တရားသူကြီးက ဖတ်တဲ့သူပဲလေ ။
ပထမတစ်ချက် ပြောလို့ရတာက ကျနော်ဟာ ကရင်တစ်ယောက်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်
ထားလို့ ရေးတာပါလို့ ပြောရမယ် ။ ဆိုလိုတာက ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ (identity) ကို က
ရင်ရယ်လို့ ခံယူ သတ်မှတ်တာကြောင့်ဆိုပြီး ပြောလို့ရတယ် ။ [ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ (identity) အ
ကြောင်း အသေးစိတ်ကတော့ ရှည်လို့ နောက်မှ ထပ်ရေးပါ့မယ်] ။
နောက်တစ်ဆင့်က ကရင်ဖြစ်ရုံနဲ့ ဝေဖန်ဖို့ ၊ ထောက်ပြဖို့ ၊ မြင်တာတွေပြောဖို့ တာဝန်ရှိသလား ။
အမှန်ကတော့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျနော် မယူဆဘူး ။ ပတ်သက်ယှက်နွယ်နေတဲ့ ၊ ပြောင်းလဲ
လို့ မရနိုင်တဲ့ နောက်ခံတူညီသူတွေအတွက် အသားလွတ် နင်းခြေမခံရလေအောင် ၊ မတရား အ
နိုင်ကျင့် မခံရလေအောင် ၊ လိုသလို ထင်တိုင်းလှည့်ပတ်လို့ မရရလေအောင် မြင်မိသတိရတာလေး
တွေကို တင်ပြလက်တို့ရုံ လောက်ပါ ။ ဝတ္တရားနဲ့ အသိစိတ်အပေါ် အခြေခံပြီး ဘယ်သူမှလည်း မ
နစ်နာစေမယ့် အဖြေနဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေက ပိုပြီးသိမြင်လာဖို့ ကြိုးပမ်းချက်
လေး တစ်ခုနှစ်ခုသာသာပါ ။
ကျနော်ယုံကြည်တာ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ။
Butterfly Effect ပါ ။ ကျနော့်ရဲ့ လိပ်ပြာတောင်ပံ တစ်ခတ်စာလေးဟာ ၊ ယုံကြည်လက်ခံသူ
သို့မဟုတ် ဒါကိုအခြေခံပြီး စိတ်ကူးစိတ်သန်း အသစ်တွေနဲ့ ထပ်ဆင့်ပွားမှုတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊
လောကဓံ တစ်ပတ်အပြည့်မှာ မုန်တိုင်း ငယ်လေးတွေလို အားကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုလေး
တွေ ရှိလာကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ် ။
ကျနော်ရေးတဲ့ ပြောတဲ့အရာတိုင်းဟာ အမှန်မဖြစ်နိုင်သလို ၊ အားလုံးကို လက်ခံလိုက်လျှောက်
စရာလို့လည်း မမြင်မိပါ ။ သို့သော် ဒါတွေကိုအခြေခံပြီး စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ချို့ ပေါ်လာဖို့အ
တွက် စေ့ဆော်မှု ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျနော့်အတွက် အောင်မြင်ပြီလို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
ခုများ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကြည့်တော့ ခေါင်းစဉ်ငယ်တပ်ထားသလိုပဲ အားကစား
ပွဲတစ်ပွဲမှာ ခေတ္တအားလပ်ချိန် ယူထားသလိုပါပဲ ။ ပြီးရင် ဆက်ဆော်ကြမယ်ဆိုသလို ဖြစ်နေ
ဒါကို ဘယ်သူမှ မမြင်ကြဘူးလား လို့မေးရင် - လူတိုင်းလိုလို မြင်ကြတာပေါ့ဗျာ ။ ပြောရင်တောင်
အားညောင်းလွန်းလို့ ။ အပေါ်ဖက်မှာ ကချင်ကိုဆော်လို့ဝရင် ကိုယ့်ဖက်လှည့်လာမှာ သေချာသ
လောက် ရှိနေတာ မသိဘူးဆိုသူရှိရင်တော့ အတော်ခွကျသူပဲလို့ ပြောနိုင်တယ် ။ ဒီကြားထဲ အား
နည်းတဲ့ SSA တို့လို အဖွဲ့တွေကျ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်နေတာလည်း မမြင်ချင်မှ အဆုံးပဲလေ ။
တစ်ဖက်မှာ ခက်တာက - တစ်အချက် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တယ် ။ နှစ်အချက် ၊
ပြည်မအစိုးရအဖွဲ့ထဲ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်လိုချင်သူတွေ ရှိပုံရတယ် ။ သုံးတစ်ချက် ၊ အစိုးရ တက်
လုပ် နေသူတွေဆီမှာ အာဏာအပြည့်ဝ ရှိပုံကမရ ။
လုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ် ။ အဲဒါကတော့ "ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူထားတာ
ကို “ဆိုင်းငံထား ဖို့” ပဲ ။ ပြန်တိုက်မယ်လို့လည်း ပြောတာမဟုတ်ဘူး ၊ လူသူရိက္ခာလက်နက်တွေ
ကြိုက်သလိုဖြည့်ဖို့ ခွင့်ပြုတာလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ သဘောတူချက်ကို ဖျက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး
လေ ။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရှမ်းနဲ့ ကချင်တွေမှာ ထိုးစစ်တွေ ရပ်တန့်ပေးဖို့ ၊ ယုံကြည်မှုတည်
ဆောက်ဖို့ ၊ လူထုနဲ့ အဖွဲ့စည်းအတွင်း အကြေအလည် ပြင်ဆင်ဖို့ ၊ ပြည်မနဲ့ တစ်ဆင့်ချင်း ပူးပေါင်း
အဖြေရှာ ညှိနှိုင်းဖို့တွေပေါ့ ။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကချင်တွေအပါဝင် အခြားအဖွဲ့စည်းတွေကို အလေးထားရာရောက်ပြီး
ကိုယ့်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံရေးအရ လုပ်သင့်တဲ့ ၊ လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ ဘောင်အတွင်းက တစ်ချက်ကို
လုပ်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
တစ်နေရာမှာတော့ ရိပ်ကနဲ တွေ့မိလိုက်ပါတယ် ။ မီးရထားဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက တိုက်ပွဲ
တွေကြောင့် ရှမ်းအဖွဲ့တွေကို အားနာတယ်ဆိုလားပဲ ။ KNU လည်း ဆိုင်းငံ့စရာလို လုပ်စရာရှိ
တာတွေလုပ်ပြီး အားနာလိုက်ရုံပါပဲ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်လိုချင်သူကို အားနာတာပဲလေ ၊ အား
(၂) ငြိမ်းချမ်းရေး တည်မြဲနိုင်ခြေ
သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှာ ဖတ်မိသလိုပေါ့ ၊ ပြည်မရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယအဆင့်မှာ - ဒို့
တာဝန်အရေးသုံးပါးကို လက်ခံဖို့ ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်ခံဖို့ ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ
ထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးတဲ့ စားပွဲပေါ် တင်လာတဲ့အခါကျရင်တော့
ကန့်လန့်ကြီးခံပြီး မီးမဖွားနိုင်တော့ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးချိုးငှက်လည်း သေဖို့ရာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နီးပါးပဲ ။
မိုးကျရွှေကိုယ် “ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါး” လို လက်တွေ့မကျတဲ့ လေလုံးကြီးကို လက်ခံပြီး သူတို့
နဲ့အတူ ကိုယ့်သိက္ခာ အကျခံမလား စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပြီ ။ လိမ်လည်လီဆည်ပြီး သန္ဒေမမှန်တဲ့
မတရား “၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ” ကိုကော ကိုယ့်လည်ချောင်းထဲ ပီကင်းဘဲ အစာခွံ့သလို
အထည့်ခံမလား ။ နောက်ဆုံးမတော့ ပါတီထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါဆိုတော့ ပွဲကသိမ်းပြီ ။
ပါတီထောင် ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေဝင် ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ ။ လူလည်ကျ အလိမ်ခံခဲ့
ရလို့ ၊ ကိုလိုနီတစ်ဖြစ်လဲ အဆင့်ကနေ တက်လမ်းမမြင်တာကြောင့် ခုလို နှစ်ရှည်လများ တိုက်
လာခဲ့ကြရတာ ။ ကဲ .. တစ်ကနေ ပြန်စလိုက်ကြရအောင် ဆိုရင်တော့ … “ရိုးသားမှု”ဆိုတဲ့ စ
ကားလုံးကို ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပေတော့မယ် ။ ဒီကြားထဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါ ရှေ့တန်းတင်
လာပြန်မယ်ဆိုရင် ပြန်ဆန်းစစ်စရာ သိပ်တောင်မလိုတော့ပါဘူး ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို မီးစင်
ကြည့်ပြီးပဲ ကရတော့မလား ၊ ရိုးသားမှု စိတ်ကောင်း စေတနာနဲ့ တန်းတူညီမျှရေး ဆိုတာတွေကို
ပြူတင်းပေါက်ကနေပဲ လွင့်သာပစ်ရတော့မလားပဲ ။
(၃) KNU နဲ့ DKBA
အချို့ကတော့ ဒီနှစ်ဖွဲ့ကို ပြန်ပေါင်းထုပ်စေချင်တယ် ။
ကျနော်မြင်တာကတော့ - နကိုကတည်းက သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ ခွဲသွားခဲ့ကြတာပဲ ၊ ပြန်
မပေါင်းပဲ လူတွေ မူတွေ ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်းတွေကိုသာ ညှိနှိုင်းပြီး မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းအနေ
နဲ့ ဆက်ရပ်တည်သွားကြရင် မကောင်းဘူးလားလို့ပါ ။ ပေါင်းသည်ဖြစ်စေ ခွဲပြီးလုပ်ကိုင်တာဖြစ်စေ
အကျိုးအပြစ်တွေကတော့ ရှိကြမှာပါပဲ ။ အကောင်းဖက်များများဖြစ်အောင် ပူးပေါင်းလုပ်နိုင်ကြဖို့ပဲ
ကရင်အပါဝင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့စည်းတွေအတွက် ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ ၊ လုံး
ပါးမပါးဖို့ ၊ တိုးတက်မှုဆီ တစ်ဆစ်ချိုး ကွေ့တက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ် ။ ကိုယ့်နဲ့
တိုက်ရိုက်မဆိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့ကို ချရေးကြည့်ချင်တယ် ။
* နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေကြပြီး ပညာနဲ့ အတွေ့ကြုံ ရှိသူတွေကို ဒေသအလိုက် စုစည်းရွေး
ချယ်ပြီး ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ် ပြန်လာကူကြဖို့ စည်းရုံးဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်တဲ့ သွားလာနေ
ထိုင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးလို့ရတယ် ။ အဖွဲ့စည်းမှာ လက်တွေ့
လုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့ ၃-၆ လလောက် အတူတွဲဖက် လုပ်ကိုင်စေပြီး အတွေ့ကြုံ ပညာ အသိ
တွေ ဖလှယ်နိုင်ရင် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်သုံးချက် ပြတ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတယ် ။ Knowledge
transfer လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သလို ၊ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ လူမှုအဖွဲ့စည်းနဲ့ အဆက်သွယ် ရင်းနှီးမှု မပြတ်
တော့ဘူး ။ အသေးစိတ်တွေတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်တွေးပေါ့နော ။
* သူပုန်ဆိုတာ ကိုယ့်နယ်မှာ အစိုးရပဲ ၊ ပြည်မနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖြစ်ရင်လည်း စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရ
စီမံခန့်ခွဲရေးတွေမှာ မပါမဖြစ် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရတော့မယ် ။ စီးပွားရေးလည်း တစ်ခုအပါဝင်ပဲ ။
ဒီတော့ လက်ရှိအဖွဲ့စည်းအတွက်လည်း ပြည်မအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ မတွဲစပ်ခင်မှာ ဥပမာ မြဝတီကုန်
စည် ဝင်ရောက်မှုလမ်းအတွက် ပြည်မအာဏာပိုင်တွေ ကောက်ခံတဲ့ အကောက်ခွန်နဲ့ အမြတ်ခွန်
တွေကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး မျှဝေခွဲယူနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ပါ ။ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ မ
ရနိုင်ပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးကို ညှိနှိုင်းမှ အတိုင်းတာတစ်ခုအထိ လျှော့ပေးနိုင်မှသာ ရှေ့ခရီးဆက်လို့
ရမယ်ဆိုတာ လက်ခံလာအောင် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား တင်
ပြဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရဖို့ လိုနိုင်ပါတယ် ။ ရေရှည်မှာ အစိုးရတစ် ရပ်ရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာရ
မယ့် နယ်မြေလူထုကိုယ်စားပြု အဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက် လုပ်ကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ဝတပ်ဖွဲ့တွေ ဘယ်လိုလုပ်သွားခဲ့သလဲဆိုတာ လူများစုအသိပါ ။
ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို အရည်မဖျော်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဒီလိုပဲ နိုင်ငံရေးနဲ့နွယ်ပြီး လုပ်
* တစ်ချိန်မှာ ပါတီနိုင်ငံရေးလည်း ဆက်နွယ်လာရတော့မယ် ။
သတိမလစ်သင့်တာကတော့ - ဖလုံစဝေါ်ပါတီတို့လို ပြည်သူတွေကို အတိုင်းတာတစ်ခုအထိ
ကိုယ်စားပြုသူတွေရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို အလေးနက်ထားဖို့ပါပဲ ။ (အွန်လိုင်းမှာ လွှတ်
တော်ကိုယ်စားလှယ် အရွေးခံရသူရဲ့ အပြောဆိုကို ဝေဖန်တာတွေ ဖတ်မိလို့ မှတ်မှတ်ရရ ရေး
ဆက်စပ်ပြီး ပြောချင်တာက - အဖွဲ့စည်းဖြစ်စေ ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေ လူလေးစားတဲ့ သိက္ခာ ၊ နိုင်
ငံရေး စီးပွားရေး စသည်ဖြင့် သြဇာအာဏာတွေဆိုတာဟာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြလို့မရပေမယ့်
တည်ဆောက်ယူရတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါတွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ပျင်းရိ ၊ ဘဝင်မြင့် ၊
လက်နက်အားကိုးလို့ မရသလို ၊ အခြေခံအကျဆုံး အုတ်မြစ်ဟာ လူထုဖြစ်တာရယ် ၊ ဒီအုတ်မြစ်
ပေါ်မှာ တည်ဖို့ရာ ကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့ သရိုးနဲ့ ၊ လူထုလိုအပ်ချက်တွေကို
ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဆိုတဲ့ အုတ်ချပ်လေးတွေ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်း လေးလေး
နက်နက် သတိပေးချင်ပါတယ် ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ လူမှုရေး ၊ အတွေးခေါ် ၊ ဥပဒေနဲ့ လူသားတွေရဲ့ စိတ်အခြေခံကြောင့်
စသည်ဖြင့် ဘယ်လိုပြောပြော အကျိုးသက်ရောက်မှု အချို့ကတော့ - မူလဋ္ဌာနေ တိုင်းရင်းသား
တွေဖြစ်တဲ့ အဘောရီးဂျင်းတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှ ထပ်ဝင်ရောက်လာသူတွေ နေထိုင်နေတဲ့ မြေ
ဒေသတွေရဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြောင်း အခမ်းနားတိုင်းလိုလိုမှာ အသိမှတ်ပြု ဖွင့်ဟပြောတဲ့
အလေ့ကို ပုံမှန်လုပ်ကြပါတယ် ။ ဒါ့ပြင် အရင် ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး လုယူသိမ်းဆည်းထားတဲ့ မြေတွေ
အတွက် လျှော်ကြေးသဘောမျိုးတွေ စီမံဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုး ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အချို့နေရာမှာ
တော့ မြေတွေကို ပြန်ပေးတာမျိုး ၊ လိုအပ်လို့ အဲဒီမြေတွေကို အသုံးပြုရမယ် ဆိုရင်လည်း ဆွေး
နွေးတိုင်ပင် ညှိနှိုင်းပြီးမှ မနစ်နာအောင် ၊ ငွေကြေးအရကော ဖွံ့ဖြိုးမှုအရပါ ဖြည့်ဆည်း ပေးတာ
တွေကို လုပ်နေကြပါပြီ ။
မြန်မာပြည်လည်း ဒီအနေထာားကို တစ်ချိန်မှာ ရောက်လာကောင်း ရောက်လာဦးမှာပါ ။
ခုနေမှာ .. မြန်မာပြည် ပြည်သူတွေအတွက် မြေအာမခံချက်တွေ ကျကျနန မရှိသလို ၊ တိုင်း
ရင်းသား ဋ္ဌာနေတွေမှာလည်း စစ်ဘေးကြောင့် ရှောင်ပြေးရသူတွေ ၊ စံပြရွာတည်လို့တို့ စီမံကိန်း
ကြောင့်လို့တို့ အကြောင်းမျိုးစုံပြ ၊ မြေအားလုံးကို နိုင်ငံတော်ကပဲ ပိုင်တယ်ဆိုပြီး လိုသလို စီမံ
လာခဲ့တာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့သလို ၊ ရှိလည်း ရှိနေတုန်းပါ ။
ကျနော်တို့တတွေ အမှောင်ခေတ် (အလယ်ခေတ်) မှာ နေနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါတွေ
ဟာ ရေရှည် ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စတွေပါ ။ အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးရဲ့ အ
စိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ၊ ဒီမြေယာကိစ္စကိုလည်း အာရုံထားပြီး စနစ်တကျ ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင် မှတ်
တမ်းတွေ ထားရှိဖို့ ၊ နစ်နာခဲ့သူ တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက်ကော နောက်ရောက်သူတွေအတွက်
ပါ အကြီးကျယ် မနစ်နာအောင် ၊ အကြို ဥပဒေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ အကောင်
ထည် ဖေါ်ပုံဖေါ်နည်းတွေကအစ စီစဉ်ရပါတော့မယ် ။
အစိုးရဆိုတာကို အကျယ်ချဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဖွင့်တော့ပေမယ့် ၊ ဆိုင်တာလေးတစ်ချို့ကို မှတ်စု
လေး ထုတ်ထားချင်ပါတယ် ။
အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ အလုပ်တွေဟာ အင်မတန်ကျယ်ပြန့် များမြောင်လှပါတယ် ။ လည်ပတ်ဖို့ရာ
ကာယဥာဏ စွမ်းအား လိုအပ်ချက်တွေ ၊ ဖြည့်ဆည်းစရာတွေက အပုံအပင်ပါ ။ ဥာဏ် ပညာ
တွေကို အလေးနက်ထားပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ၊ ရေတို ရေရှည်တွေအတွက် ထည့်
တွက်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးလေးနက် ခက်ခဲမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တော့ မ
ဟုတ်ပါဘူး ။ မြန်မာပြည်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် တစ်ဝက်လောက်မှာ မဆီမဆိုင် စစ်တပ်ကို မ
ဏ္ဍိုင်ထားပြီး အစိုးရယန္တယားကို လည်ပတ်လာခဲ့တာပါ ။ တည့်တည့်ပြောရင် ဒီလောက်ကတော့
ကမ်းနားက ကုန်ထမ်းတဲ့သူကို ကြာကြာလုပ်ခိုင်းရင်လည်း လုပ်တတ်မှာပါပဲ ။ မကွာပါဘူး ။
သို့ပေမယ့် ခုနေမှာတော့ ပြည်မရဲ့ အရှိန်ရလာနေတဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ ပညာတတ်တွေကို စု
စည်းလာတာဟာလည်း အလေးနက်ထား ထည့်တွက်ရမယ့် အနေထားတစ်ရပ်ပါ ။ အရင်က
ပြည်မနဲ့ အခုပြည်မနဲ့ အတူတူပဲဆိုပြီး ကိုယ့်ဖက်က မပြင်မဆင်နဲ့ နေရင်တော့ အများသိ စ
ကားလုံး တစ်လုံးရှိပါတယ် ။
“တာ့တာ” ပါတဲ့ ။ တလွဲတော့ မထင်ပါနဲ့ ၊ နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့မှာကို ဆိုလိုတာပါ ။
အနာဂါတ် လက်နက်ကိုင်ကဏ္ဍကတော့ ဆေးမရှိခင်မှာ အနာကပ်ရတဲ့ ဖယောင်းချက်လိုပဲ
လိုနေဦး ၊ ရှိနေရဦးမှာပါ ။ ဒီအနေထားအတွက် အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် ၊ အဓိကကျ
တဲ့ တစ်ခုကတော့ - “လက်နက်ကိုအခြေခံတဲ့ ကာယပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အား (physical force)
ကိုမှ အလေးထား အရေးထားတတ်သူတွေ အခြားတစ်ဖက် (ပြည်မ) မှာ များနေသေးလို့” ပါပဲ ။
ခုနေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေက မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးနေတာတော့
အမှန်ပါ ။ သို့ပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်အဆင့်ပဲ ရှိနေပါသေးတယ် ။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဌက်ပျောသီးအ
ခွံကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဆက်နွှာသွားမလဲဆိုတာ အကောင်းဆုံးကိုပဲ မျှော်လင့်ကြရပါတော့မယ် ။
အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ လုပ်လို့ကိုင်လို့ရတာ အများကြီးရှိပါတယ် ။ စရေးမယ် မကြံရသေးပေ
မယ့် နည်းနည်းလည်း ရှည်သွားပြီ ။ တစ်ဖက်မှာ ကိုယ်လည်း လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အ
ညွှန်းစာအုပ် ရေးမယ့်သူမဟုတ်တော့ အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တာကို လတ်တလော လက်
လှမ်းမီရာ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်ထားလိုက်ပါ့မယ် ။ ကျနော် မျက်စေ့လျှမ်းသွားတဲ့အပိုင်း ၊ အာရုံ
နည်းလို့ လစ်ဟာသွားတဲ့အပိုင်းနဲ့ မနီးစပ်လို့ မသိနားမလည်တဲ့ အပိုင်းတွေကိုတော့ ဖြည့်တွေး
ပေးကြပါ ။ အကြံပေးလို့ ရသလို ၊ ကိုယ့်နီးစပ် ရာနဲ့ ဖလှယ်ကြလို့လည်း ရပါတယ် ။ နောက်
တစ်ပိုင်းကျမှ သာမန်လူထု အရပ်သားတွေ အဓိကကျရာ အပိုင်းကို ရေးပါဦးမယ် ။
၃၁ ၊ ၀၈ ၊ ၂၁၁၂
Posted by မန်းကိုကို at 8/31/2012
ကျူးလွန်ခဲ့မှုများအတွက် တာဝန်ခံဖို့ လိုသည် (ဧရာဝတီ)
ေေေ September 12, 2012 - 8:43 pm
ဧရာဝတီမှာ လာပေးတဲ့ မှတ်ချက်တော်တော်များများက လိုရာကို နှဲ့ပေး၊ စောင်းပေး၊ လမ်းကြောင်းပေးတာတွေက တယ်များသကိုး။
မန်းကိုကို September 15, 2012 at 8:54 PM
ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်သလောက်ဖြစ်ပေမယ့် ၊ မနေ့က spam မှာ တွေ့မိလို့ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
နောက်ပို့စ်တစ်ပုဒ်မှာတော့ ပေးထားတဲ့လင့်နဲ့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ရင်တောင် သွယ်ဝိုက်ပြီး သက်ဆိုင်နေတာ အနည်းအကျဉ်း ရေးပြနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
ခုဒီမှာရေးရတာ..ဆရာ တွေးသွားတဲ့ရှုထောင့်ကို ကြိုက်တယ်…….ဆက်ရေးစေချင်တယ်…………ဘာလို့လဲဆိုတော့…….
ဆရာတို့…. အဲ ကျွန်တော်လဲ နည်းနည်းဆိုင်တဲ့…ကျွန်တော်တို့ ပတ်ကညောများ…..အလွန်ရိုးသည်……ထပ်နည်းနည်းပြောရင်…အ သည်…..(နိုင်ငံရေး..လှည့်ကွက်မှာ)
• ကျွန်တော်သည် ကရင်သွေး ပါသည်ဆိုရုံမျှပါသော ဆရာဝန်တယောက်… အရောင်စုံကရင်တွေကြးထဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလဲ…ဆယ်စုတခုနီးပါး ..အရောင်စုံဆိုတာ……..အ၀ါကရင်..အပြာကရင်…အနက်ကရင်….
KNLA-PC, KNU, DKBA,BGF, KPF…ခုလိုရှင်းရတာ ကရင်တွေ ဘ၀ကို…(အနိမ့်ဆုံး တီးမိခေါက်မိသူ…လို့ဆိုချင်တာပါ……..)
န၀တ…နအဖကို အသလွတ် မုန်းနေသူ ဆဲနေသူလဲ မဟုတ်သလို…ကြည်ညိုတဲ့အထဲလည်း လုံးဝမပါပါ……ဂုဏ်ဖေါ်ပြောရရင်….neutral လို့ဆိုချင်ပါတယ်…… အာဏာရရင်… အာဏာရှိရင်… အများစု အာဏြာ့ပမယ်ဆိုတာ….ခံယူထားသူ..OK…… ကျွန်တော်…ဘာမှ မဟုတ်ကြောင်း….ပြောပြီးနော်….
• KNLA-PC က ခေါင်းဆောင်ကြီးကြီးတယောက်က ကျွန်တော့ကိုပြောဖူးသည်…..ဆရာ ငြိမ်းချမ်းရေးတခါဆွေးနွေးရင် ကရင် တစိတ်ထပ်ကွဲတယ်တဲ့…ဥပမာ…KPF…..DKBA(original)….ပြီးတော့DKBA……BGF (သူလည်း…နေပြည်တော်လည်းးသွားပြီးရော………..သွားရော)
• ဆရာဆောင်းပါးထဲကလို…..ကရင်ကို အသေအကြေ ဆော်နေတုန်း…ကချင်ကို ငြိမ်းထားတာ…ကျွန်တော့ တပည့် ကားဆရာ(ကရင်)တောင်သိတယ်…. ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ…ကောင်းတယ်တဲ့…ကချင်ကို တိုက်တာကို….သူ ကချင်ကို မုန်းနေသူမဟုတ်ဘူးနော်……..interpret လုပ်တာလွဲနေတာလေ…..(ခု ငြိမ်းလဲ…..ဒီလို ငါတို့လဲ နောက်တခေါက် ကြုံနိုင်တာမျိုး လုံးဝ(လုံးဝ) မတွေးတတ်ဘူး
• ဗိုလ်ချုပ်မြသား….နေစိုးမြ…. ဘာလို့ ငြိမ်းချမ်းရေး …ယူတာလဲ…..
• မြောက်ပေးလိုက်တော့…ဗိုလ်ချစ်သူ….တပ်မဟာ ၇ ကို အသေအကြေတိုက်တယ်…..ဘယ်သူသေလဲ….ဘယ်သူပြတ်သလဲ….ဗိုလ်ချစ်သူရဲ့ လက်ထောက် စံပြုတ်သေတယ်……. ဘယ်သူသတ်တာ……(ဒါကquestion mark ပါ…..KNU…may be…..Burmese Army…may be… then…?????)
• ခုလာပြန်ပြီ… နှုတ်ခမ်းမွှေး…….ပါသွားပြန်ပြီ…..KKO ဖွဲ့…. မန်းဘဇန်…တို့ကိုထုတ်….. (reason က…တဖက်နိုင်ငံသား…. ခံယူလို့တဲ့….ဒါ….ထင်တာမမှားရင်…..KKOမဖွဲ့ခင်ထဲက…မန်းဘဇန်Thai citizen ရပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်…thai citizen က.. ဘင်္ဂါလီ….မှတ်ပုံတင်ရတာ.. ပေါက်ဖေါ်တွေ…. မှတ်ပုံတင်ရတာလောက် မလွယ်ပါဘူးဗျာ…….ခေါ်တုန်းကထဲက..thai citizen ရပြီးသားလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ……..
• နော်စီဖိုးရာစိန်….နော်မေဦး…..(ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစိတ်မ၀င်စားတဲ့လူတောင် သတိထားမိတဲ့…န၀တရဲ့…ရိုးဟောင်းနေတဲ့ ဗျူဟာကိုသတိထားမိရင်)….အိုးမဲသုတ်တတ်တဲ့…..န၀တ…ဗျူဟာကို…မတွေးမိဘူးလား
ဆရာ…စာတွေထပ်ရေးပါ…… လူများများသိအောင်လုပ်ပါ…ဆရာ သုံးသွားတဲ့ butterfly effect ရ အောင်လို့က……. မဟုတ်ရင်….. ဗိုလ်ဆန်းအောင်/ဗိုလ်ကျော်သက် အဖွဲ့နဲ့…ဗိုလ်လားပွယ် အသေအကြေတိုက်တာ…. ၃နှစ် အတွင်း ကြားနေရလိမ့်မယ်……….
ကရင်လူထု....လှည့်ဖျားမှု ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ...
မန်းကိုကို September 21, 2012 at 12:05 AM
ဆရာ့ကို စာပြန်နည်းနည်း နောက်ကျသွားတာ စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ ၊ ကျနော်လည်း လုပ်ချင်တာနဲ့ ရတဲ့အချိန် သိပ်ဟန်မကျလို့ပါ ။
ပထမ ၊ မှတ်ချက်ရှည်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ မတော်များ ကျနော်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောခဲ့မိဘူးကောင်း ပြောခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ် ။ ခုတော့ ကျနော့်မှာက ကလောင်နာမည်သဘောမျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့် မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အရင်ဆုံးပြောရမှာက ဆရာ့အနေနဲ့ ကရင်တွေဘဝကို အနိမ့်ဆုံး တီးခေါက်မိသူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောသလို ၊ ကျနော်ဟာလည်း ဘယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့မှ နက်နက်နဲနဲ မယှက်နွယ်ခဲ့တာကြောင့် ခုနေ လူကြီးသူမတွေ ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါ ပါးစပ်ဟပြီး နားထောင်နေရတုန်းပါ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မရေးပြဖြစ်သေးပေမယ့် သိလာကြုံလာခဲ့သမျှကို မူတည်ပြီး ခြုံငုံပြောရရင် “ကရင်တွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်မှာ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေ မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး ။ စစ်တိုက်ကောင်းသူတွေဖြစ်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် စစ်နိုင်အောင်တိုက်တတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကောင်းတွေ ဖြစ်မလာခဲ့ကြဘူး”လို့ အကျဉ်းချုပ်ရပါလိမ့်မယ် ။
ကျနော့်အနေနဲ့က အဲဒီလို နိုင်ငံရေးသမားကောင်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ပေမယ့် ၊ လိုအပ်တဲ့ ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်ပြီး တွေ့ကြုံလာတာတွေကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်နိုင်ကြအောင် ကိုယ်တွေးမိတဲ့ အပိုင်းအစတွေကို ဆပွားအကျိုး ဖြစ်လိုဖြစ်ငြား ချပြဆွေးနွေးကြည့်တဲ့ သဘောပါ ။ ကျနော့်တစ်ယောက်အားထဲနဲ့ ဖြစ်ဖို့မလွယ် မပြည့်စုံနိုင်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားကောင်း စိတ်ဝင်စားကြမယ့် အများရှေ့ဆီ တွန်းရွှေ့ပေးဖို့ ကြိုးစားတာပါ ။
တစ်ခါ ဒီလိုလုပ်ရာမှာလည်း အကန့်အသတ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းသင့်တာတွေလည်း ရှိလာပြန်တယ် ။
ချွတ်ယွင်းချက်တွေကို အပ်ပေါက်ရှာသလိုသာ ရှာရရင် ၊ ဟိုးအစ ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်းလောက်က စရမယ် ထင်ပါတယ် ။ ခက်တာကလည်း ကျနော်တို့ကရင်တွေ အများစုမှာ အဝေဖန်သိပ်မခံနိုင်ကြသေးတာလည်း ထည့်တွက်ရပြန်ပါတယ် ။ တစ်ဖက်မှာလည်း မပြောပြန်ရင်၊ နည်းလမ်းမရှာရင် ဘယ်တော့မှ ဘာမှဖြစ်မလာတော့မယ့် အရေးကလည်း ရှိနေပြန်ပါသေးတယ် ။
ဒီတော့ ကျနော်လည်း လက်လှမ်းမီသမျှ တွေးလို့ရသမျှကို ဆရာပြောသလို ဆက်ရေးသွားမှာပါ ။
ထောက်ပြသူ ၊ ဝိုင်းဖြည့်ပေးသူ ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ ထပ်ဆင့်ပွားဖြစ်စေ အမြင်သစ်နဲ့ဖြစ်စေ လုပ်ချင်သူ ၊ လုပ်နိုင်သူနဲ့ အနည်းဆုံး ဒါတွေကို လက်မခံရင်တောင် အပြုသဘောနဲ့ တင်ပြနေကြတယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးသူတွေ များလာဖို့တော့ မျှော်လင့်တာပါပဲ ။
ဆရာပြောတဲ့ အသေးစိတ်တွေကို ခုနေခါ ပြန်မပြောနိုင်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ ။ မှတ်ချက်အတွက် (Saw Khu Eh အပါဝင်) ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောပါရစေ ။
Saw Khu Eh September 18, 2012 at 10:00 AM
Mahn Robert Zan isaUS citizen. He live in the same town with me. Just correction!
ကရင်ကရင် ဘာကိုမြင် ~ ဟိုရှေ့နားက ငြိမ်းချမ်းရေး ချ...
ခေတ်တစ်လျားရဲ့ ရောင်ပြန်တစ်မျက်နှာ (ဒုတိယပိုင်း)